मिर्मिरे, Author at Mirmire Bihani
November 24, 2021 मिर्मिरेLeaveaComment on छोराले विदेशमा राम्रो काम नपाएपछि बुवाले गो’ली हानी ‘एजेन्ट’को ह’त्या !
छोराले विदेशमा राम्रो काम नपाएपछि उनका बुवाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने ‘एजेन्ट’लाई यो’जना बनाएरै गो’ली हानी ह’त्या गरेका छन् । कपिलवस्तु कृष्णनगर नगरपालिका-१० का ५५ वर्षीय पारस पुरीलाई गो’ली हा’नी ह¥त्या गरेको आ’रो’पमा प्र’ह’रीले एक जनालाई प’क्रा’उ गरेको छ। विजयनगर गाउँपालिका-१ का ५० वर्षीय पशुपति कुर्मीलाई प्र’ह’रीले प’क्रा’उ गरेको हो। उनलाई कपिलवस्तु नगरपालिका-१० नेपाल-भारत सिमाबाट प’क्रा’उ […]
मन मिले के हुदैन सब हुन्छ सम्पर्क नम्बर सहित
November 24, 2021 मिर्मिरेLeaveaComment on मन मिले के हुदैन सब हुन्छ सम्पर्क नम्बर सहित
उनले केही समय अगाडी मात्र एउटा गित बजारमा सार्बजनिक गरेकी पनि थिईन । गित पनि गाउने, रोमान्सका र यौनका बारेमा रमाईलो कुरा गर्ने सबिना सबु मोडल पनि हुन । उनले आफुलाई हट केक भनेर पनि चिनाउछिन । उनले सामाजिक सञ्जाल यु ट्युवमा धेरै अन्र्तबार्ता दिईकी छिन । उनलाई प्राय यु ट्युवरहरुले अलिक छाडा खालको […]
मन मिल्ने केटा पायछी बिहे गर्न चाहान्छु सम्पर्क गर्नु होला
November 24, 2021 मिर्मिरेLeaveaComment on मन मिल्ने केटा पायछी बिहे गर्न चाहान्छु सम्पर्क गर्नु होला
काठमाडौं । विवाह एउटा संयोग हो । विवाह अघि जे जस्तो भएपनि विवाहपछि श्रीमान् र श्रीमतीबीच उचित तालमेल हुनु आवश्यक छ । त्यसैले त नेपाली समाजमा भन्ने गरिएको छ, श्रीमान् र श्रीमती भनेका एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । परिवाररुपी रथ हाँक्नका लागि दुबै पाङ्ग्राको जरुरी र महत्व हुन्छ । एउटा पाङ्ग्रा नभई रथ गुड्दैन […]
विद्युतीय चुला सबैले प्रयोग गरौ र भारतीय ग्यास विस्तापित गरौ
November 23, 2021 मिर्मिरेLeaveaComment on विद्युतीय चुला सबैले प्रयोग गरौ र भारतीय ग्यास विस्तापित गरौ
दिन प्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको बढ्दो मूल्यले नेपाली भान्सा महँगिएको छ । केही दिनअघि नेपाल आयल निगमले ग्यासको भाउ एकैपटक प्रतिसिलिण्डर ७५ रुपैयाँले बढायो । ‘जसले नेपाली भान्सालाई झनै महँगो बनाएको छ । एकातिर आयातित ग्यासको भाउ बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर नेपालमै उत्पादित बिजुलीले बजार खोजिरहेको अवस्था छ । यसको लागि विद्युत प्राधिकरणले […]
यति सस्ता सस्ता बाइक इस्कूटर इच्छुक ले सम्पर्क गर्नुहोस
November 23, 2021 मिर्मिरेLeaveaComment on यति सस्ता सस्ता बाइक इस्कूटर इच्छुक ले सम्पर्क गर्नुहोस
समाचार को भिडियो पेज को अन्त मा राखिय को छ यो पनि पढनुहोस विश्वमा यस्ता घटना हुन्छन् जुन कल्पनाभन्दा बाहिरका । कतिपय घटना यथार्थ तर अ’पत्या’रिला पनि हुन्छन् कतिपय घटना सत्य रहन्छन् । यस्तै घटना नाइजेरियामा भएको छ । पहिलो विवाहको सम्बन्ध विच्छेद गरेर दोस्रो विवाह गरेकी एक महिलाले आफ्नो पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकी छन् […]
November 23, 2021 मिर्मिरेLeaveaComment on छोरीहरूले गरे बुबाको दा’हसंस्कार, छिमेकीले मानेनन् छुन
उदयपुर आफन्त र दाजुभाइ नहुँदा कटारी नगरपालिका ५ बरमझियाका दुई जना दिदीबहिनीले सोमबार बुबाको मृ’त्युपछि आफैंले श(वयात्रा गरी ‘दा’हसं’स्कार’ गरेका छन् ।स्थानीय ६० वर्षीय बालबहादुर मगरको मृ’त्युपछि छिमेकीले श’व छुन नमानेपछि १७ र २० वर्षीया छोरीले नै दा’ह(संस्कार गरेका हुन् । बालबहादुर बसोबास गर्दै आएको बरमझियामा आफ्नो समुदायका आफन्त र दाजुभाइ छैनन् । दाजुभाइ र आफन्त नहुँदा स्थानीयले […]
गरिब किसानका ५ छोरीहरु सरकारी अधिकृत, तीन जनाले एकैपटक निकाले नाम
November 23, 2021 मिर्मिरेLeaveaComment on गरिब किसानका ५ छोरीहरु सरकारी अधिकृत, तीन जनाले एकैपटक निकाले नाम
हाम्रो समाजमा अहिले पनि छोरीलाई बोझका रुपमा लिनेहरु छन् । तर छोरी पनि छोरा भन्दा कम छैनन भन्ने उदाहारण समय समयमा देख्न पाइन्छ । यस्तै एक समाचार भारत राजस्थानको हनुमानगढ जिल्लाबाट आएको छ । त्यहाँको रावतसरका तीन जना दिदीबहिनीले एक साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा ९आरएएस० अधिकारी भएर इतिहास रचेका छन् । यी तीन दिदीबहिनीहरूले आफ्नो […]
आफ्नो पतिको लिं’ग ला मो भन्दै, सहन नसकी सम्बन्ध विच्छेद पतिलाई देखाउन कै लागि भयनी अर्को बिहे गर्छु
November 23, 2021 मिर्मिरेLeaveaComment on आफ्नो पतिको लिं’ग ला मो भन्दै, सहन नसकी सम्बन्ध विच्छेद पतिलाई देखाउन कै लागि भयनी अर्को बिहे गर्छु
विश्वमा यस्ता घटना हुन्छन् जुन कल्पनाभन्दा बाहिरका । कतिपय घटना यथार्थ तर अ’पत्या’रिला पनि हुन्छन् कतिपय घटना सत्य रहन्छन् । यस्तै घटना नाइजेरियामा भएको छ । पहिलो विवाहको सम्बन्ध विच्छेद गरेर दोस्रो विवाह गरेकी एक महिलाले आफ्नो पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकी छन् । सम्बन्ध विच्छेदको कारण श्रीमानको लिं’ग ला’ मो भएको र आफूलाई अ स […]
November 23, 2021 मिर्मिरेLeaveaComment on कुवेत पुगेकि चेली भन्छिन्, बिदेशमा नेपाली दाजुभाइले सहयोग गर्ला भन्दा लभ पो गरम भन्छन!
विदेशबाट फर्केकी आमाजु दिदीले कुवेतमा काम राम्रो छ भनेपछि पार्वतीले विदेश जाने सोच बनाउनुभयो । पार्वतीका तीन जना जेठानी देउरानी त अहिले पनि विदेशमा छन् । त्यसैले उहाँले रोजगारीका लागि विदेश कसरी जाने भन्ने कुरा कसैलाई सोध्नु पर्दैनथ्यो । छनलाई पार्वती र उहाँका श्रीमान् मुकुन्द अधिकारीको त्यति धेरै ऋण पनि थिएन । जग्गा बन्धकीमा राखेको […]
पाकिस्तानले अफगानिस्तानलाई २ करोड ८० लाख डलर बराबरको मानवीय सहयोग गर्ने November 24, 2021
डा. सि के राउतलाई जनमत माटी यात्रा, November 24, 2021
छोराले विदेशमा राम्रो काम नपाएपछि बुवाले गो’ली हानी ‘एजेन्ट’को ह’त्या ! November 24, 2021
फेरि बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ : कुन देशको कति ? हेर्नुहोस् November 24, 2021
विद्युतीय चुला सबैले प्रयोग गरौ र भारतीय ग्यास विस्तापित गरौ November 24, 2021